SIDA LOO ABUURO LOONA DARYEELO XAKAMAYNTA MEELAHA BANNAAN - CROCUS
Dhirta iyo daryeelka si sax ah u xaddidan
Ubax guga oo aan caadi aheyn - kuwani waa isku-dhafan. Waxay bilaabaan inay bararaan guga hore iyo kuwa kale ku raaxee midabkooda illaa toban maalmood. Ka dib markii ubaxyada yaraaday, tufaaxu wali waa mid casri ah oo cusub, laakiin bartamaha bisha Juun iyaguna way iman doonaan. Dheeraad ah, miisaanku wuxuu yimaadaa nasasho. Qodobkani waxaanu u sheegi doonaa wax kasta oo aad xiiseyn karto.
Crocus ama saffron - sharaxaad
Crocus ama, sida xitaa si wacan loo yaqaan magac kale, saffron waa geedka qashinka ah ee qashinka ah. Duurjoogta, waxay ku koreysaa garbaha, kabaha, meelaha dhaadheer iyo cayayaanka dhaadheer ee Caucasus, Crimea, Aasiya, Bariga Dhexe iyo koonfurta Yurub. Noocyo dhowr ah oo khatarta ah ayaa hoos ku qoran Buugga Cas. Crocus waa warshad qurux badan, laakiin aan laheyn sida ay suurad wacan tahay, ma aha ubaxu aad u dheer - kaliya 7-10 maalmood.
Saffron - Tani waa magaca sayniska ee dhaqanka ubaxa, laakiin suugaanta ku saabsan floriculture, magaca Laatiinka ee Laatigu weli waa la qaybiyey. Tani waa ubax yar ilaa 10 cm oo dherer leh caleemo khafiif ah oo khafiif ah oo la duubay. Warshadu waxay leedahay midab kala duwan, laakiin qaab isku mid ah oo lagu duubo ubax. Marka xakameynayo ubaxyada, noocyada intooda badan ubaxaa guga hore, qaar ka mid ah dayrta.
Ubaxa wuxuu u muuqdaa hal, laba ama saddex guluub. Perianth - segmented foomka of a corolla ah. Qeybaha ayaa isku wada duuban tuubo dhaadheer, taas oo gaari kara 10 cm noocyada qaar. Maqnaanshaha aasaasiga ah, ficilku wuxuu sameeyaa kaalintiisa wuxuuna keenaa ubaxa dusha sare. Lifaaqa qaybsan ee qaybta ah wuxuu ka kooban yahay lix qaybood, mid kasta oo ka mid ah ayaa ka mid ah qaybta sare. Boogaha si buuxda u furan ayaa gaari kara 8 cm dhexroor.
Ma taqaanaa? Magaca Crocus wuxuu ka yimaadaa Giriigga "Kroki" - muraayad ama fiber. Saffron waxay ku qanacsan tahay Carabiga "Zeferan", oo u turjuman sida huruud ah.
Doorashada meel si ay u abuuraan xakameyn
Dad badan ma ogaan karaan in isku-dheelitirnaanta loo kala qaybin karo dayrta iyo gu'ga, sidaas darteed, beeritaanka iyo daryeellidda iyaga oo ku jira berrin furan ayaa kala duwan. Markaad dooranaysid meel, maskaxda ku hay in noocyada la beeray guga ay u baahan yihiin iftiin qorrax leh. Xilliga dayrta, marka loo eego, ayaa si fiican loo dulqaataa, xayiraad yar oo ka soo baxaysa geedo waaweyn. Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado in haraaga badan ee ubaxyada lagu qurxiyo ee saffron aan si buuxda loo shaacin, laakiin halkaan, tusaale ahaan, sharuudaha dayrta ee Sharoyan ayaa ka sii daraya qorraxda qorraxda marka loo eego shoogga.
Xoogsheegashadu waxay u egyihiin mid aad u habboon oo ka mid ah cagaarka cawska cawska, laakiin waa inaad ka fogaato inaad doorato meelahan oo kale. Oo halkan waa sababta. Cawska cawsku wuxuu u baahan yahay jawiga caadiga ah, sidaas darteed waxaa suurtagal ah in si khaas ah u waxyeeleeyaan caleenta cagaarka. Natiijo ahaan, cormu si buuxda uma hagaagi karo.
Laga soo bilaabo aragtida heesaha ah, koritaanka odhaahda dalka ayaa si fiican loogu abaabulay kooxaha. Intaa waxaa dheer, dabiiciga ugu weyn waxaa la gaari karaa haddii nalalka lagu beeray meelo kala duwan oo midba midka kale ah, simulating wareegga dabiiciga ah oo aan caadi ahayn. Si aad u abuurto ubax adag oo xakameyn ah, waxay u baahan yihiin in lagu beeray shabaqa 3x3 cm. M waa inuu tagaa ugu yaraan 50 nalal.
Waa muhiim! Ka hor inta aan laga beeri corms ciidda furan, iyaga soo qaado "Fundazole" ama "Maxime".
Xaaladdan oo kale, sida beerta ubaxa dadweynaha, waa inaad soo saartaa miisaanka ugu horeeya ee barta kore ee geeska - xayndaabka, tusaale ahaan. Saffron waxay si fiican u socotaa dhirta qorraxda xagaaga ama sanadlaha. Laguma talinayo in lagu beero dalagyada dilka ah, sababtoo ah muddada ay firfircoonidooda firfircooni waxay ku dhacdaa qashin iyo kaabisashada digriiga bulaacada. Isku dhufashada beerta dhagaxa ayaa si muuqata u muuqata. Ka dib markii ay Bloom, dhulka dhuunta waxaa lagu dabooli karaa sanadlaha yaryar ee duulaya.
Miyuu xoogga saarayaa dalbashada ciidda?
Sababtoo ah xaqiiqda ah in miisaaniyadu ay yihiin dayrta iyo gu'ga, hooska iyo iftiinka jecel, su'aal macquul ah ayaa soo ifbaxaysa haddii ay jiraan sababo guud oo ah nooc kasta oo dhirtaas lagu beeray. Xaqiiqdii, ma jiraan shuruudo gaar ah oo ku saabsan ciidda. Qof kasta oo guriga ku habboon wuxuu ku haboon yahay, laakiin ugu raaxaysiga horumarka wuxuu noqon doonaa iftiin iyo hodan ku filan humus. Cinjir sida quruxsan, si dabacsan oo si ba'an loo beeray ciidda dabiiciga ah. Laakiin, sida dhirta qoryaha oo dhan, biyuhu way dhiman karaan.
Haddii, si kastaba ha noqotee, dhoobo dhoobo ah oo ku taal agagaarkaaga, markaa si aad u yareyso si ay u koraan caafimaad iyo qurux, daryeelka waa in la bilaabo samaynta ciidda. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro peat iyo ciid si dhoobo dhoobo oo si fiican u bacrimiya walxaha dabiiciga ah. 1 kiiloomitir. Qalabka soo socda ayaa la soo saarayaa.: 20 kg oo ah peat ama humus, 100 g oo ah lafo iyo 50-70 g oo ah Bacriminta oo ku saleysan raad raac.
Waa muhiim! Ma aha lagama maarmaan in la soo bandhigo humus galay carrada lagu beeray, waxaa ka wanaagsan inaad beddelato peat-sare moor. Xakameyntu si fiican uma kobcinayso korna u kordho dheellitirka nafaqooyinka, gaar ahaan nitrogen.
Goorta ay ku beeri karaan xakamaynta
Qaar badan oo beeralayda ubaxa ah ayaa si qalad ah u aaminsan in isku-dhafka ay yihiin dhirta ubaxyada ah ee guga, sidaa darteed waa la yaabay oo waxay yiraahdaan: "Waxaan ku beeri karnaa kaliya dhirta". Marka aad iibsanayso wax beerashada, hubso inaad tixgeliso hal arin oo muhiim ah: waxaa jira noocyo dayrta oo la beeray guga. Tani waxay ka ciyaaraysaa door muhiim ah, maaddaama wareegyada horumarka ee dayrta iyo guluubka guga ayan ku dhicin. Tani waa qodob muhim ah marka la tixgelinayo iyo go'aaminaya taariikhda dhicitaanka.
In dukaamada ubaxyada iyo bandhigyada, soo saaro stock for haqab-beelka ubax ee dayrta waxaa la iibiyaa leh calaamadda "ubax dayrta dayrta". Blossoms Spring sidoo kale waxaa laga iibsan karaa suuqyada caadiga ah. Dabcan, dukaanka ubaxa waxaa lagugu qaadi doonaa qalabka tufaaxa ugu sarreeya, laakiin, si tartiib tartiib ah, kuwa kufilmaamaya, kuwaas oo nalalka laga iibsado suuqyada dabiiciga ah, qaadashada xididka, iyo iyaga oo sii kordhaya ma qaadan doono daryeel gaar ah.
Ma taqaanaa? Saffron waxa loo adeegsan jiray dawo iyo foorno marka la samaynayo caado diimeed. Xilliga khafiifka ah, kobcinta dhadhanka iyo midabka cuntada, sacfraan waxaa loo isticmaalaa karinta ilaa maanta.
Xilliga gu'ga ee guga, wareegga sanadka ee horumarintu wuxuu bilaabmayaa Maarso (waxaa jira noocyo qaar oo xataa xataa February) iyada oo koritaanka caleemaha kowaad. Wixii horumarin deg deg ah oo degdeg ah ee dhirta u baahan tahay in la ogaado sida loo quudiyo rabitaanka guga. Wixii iyaga, Bacriminta ku salaysan fosfooraska iyo potassium. Waxaa la samayn karaa marka caleemaha ugu horeysay u muuqday, ka dibna inta lagu guda jiro muddada ubax iyo dhamaadka, marka ubaxyada yaraaday.
Sidaas awgeed, waxaad ku biirisaa samaynta habboon ee cormerka ah iyo si ku filan u quudin. Wax yar ka dib, bisha bisha Abriil, ubaxyada ayaa u muuqda oo ubaxyada. Marka ay soo gaabiyaan ubaxyada, burooyinkuna waxay u furan yihiin laba illaa saddex toddobaad. Dhammaadka caleemaha ubaxu waxay sii wadaan inay koraan ilaa ay ka baxaan abuurka. Dhamaadka Juun waxay ku qallajiyaan.
Dhammaan nidaamyadani waxay u dhacaan si gaar ah sababtoo ah nafaqooyinka ku jira cormarka la ururiyey sannadkii hore. Marka guluubku daalan yahay, way dhimataa. Qufacu waxay sameeyaan guluubka cusub oo kor ku yaal mid ka mid ah gabow markii wakhtiga ubaxu dhammaado. Waxay noqon doontaa beddel. Waxay leedahay burooyinkeeda ah burooyinkeeda ee cusboonaysiinta ubaxyada iyo caleemaha.
Xilliga soo socda ee koritaanka iyo qalajinta caleemaha, guluubku wuxuu horay u soo ururin doonaa tamarta lagama maarmaanka ah. Meel meel dhexe ku yaalla Juun, cormulku wuxuu geli doonaa hab xasilloon, iyo xilliga dayrta waxay mar kale u dhaqmi doontaa: waxay kori doontaa xididada waxayna sii wadi doontaa habka cuntooyinka. Next, geeddi-socodka samaynta budh iyo dib-u-soo-galka goynta qaybaha mustaqbalka ee geedka waxaa si buuxda loo dhammeystirey.
Ha horey u saarin caleemaha oo ha ku soo celinin geedka inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, si aanay u dhicin wax sabab ah sababta loo xoojiyay ma aysan beerin guga. Tani waxay carqaladeysaa qaabka nolosha ee xakameynta waxayna keenaysaa dib-u-dhac koritaan. Nalalka naftooda kama dhintaan tan iyo ugu dambeyntii soo kabashada, mar kale ubax. Laakiin baxnaanintu waxay qaadan kartaa laba sano, laakiin inta lagu jiro waqtigan waxaad illoobi kartaa wax soo saarka iyo si khaas ah u qodo.
Waxaa muuqata in beerista warshad ay si toos ah ugu xiran tahay Bisaylka guluubka, tani waxay tusinaysaa in xakamaynta ay tahay in ay ilaaliso sharafta caleemaha ilaa inta la rabo. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ku caawiso ubax si kasta oo ay ka saareen sanduuqyada abuurka daciifiya corm, iyo beerto qodobka ka hor dhamaadka mudada cas ee. Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo xumbada guga waa bisha Sebtembar, sababtoo ah wax yar ka dib markii xididdada yaryar ay ka muuqan doonaan nalalka, kuwaas oo si fudud loo dhaawici karo.
Cirrada nololeed ee miisaanka yar ee guga ee xilliga gu'ga waxay la mid yihiin wakhtiyada colchicum. Badanaa way wareeraan. Si aad uga fogaato qalad, waa inaad ogaataa in nalalka saambarradu ay aad u yaryihiin - ilaa 2.5 cm iyo saddex stamens ee ubaxa, marka colchicum uu leeyahay laba jeer oo badan. Inta badan xilliyada dayrta waxay bilaabmaysaa wareegteeda nololeed ee ubax.
Inta lagu jiro muddadan, caleemaha ayaa sii kordhaya oo beddelaya cormul. Qaar ka mid ah soo saartaa caleemo shinni ah iyo dhamaystirida nalalka cusub guga, marka noocyada hore lagu sharraxay bilaabmeen inay ubaxaan. Xoogaa, ubaxyada dayrta goor dambe, tag jiilaalka, oo aan dhammeynin ubax. Natiijo ahaan, abuur miro ayaa la sameeyay. Laakiin tani ma daciifiso warshadda waana inaanay keenin walaac.
Xilliga dayrta waxay leeyihiin wakhti aan caadi aheyn bil ka hor xilligii guga, sidaas darteed ficilka ugu wayn ee fal-qabatinka waa bisha August. Sidaa darteed, waayo, horumarka caadiga ah ee dayrta waxay isku dayayaan isla sanadkaas, waa in la beeraa inta u dhexeysa dhammaadka July iyo badhtamaha bisha Agoosto. Laakiin sababta aan ujirin miisaanka oo lagu iibsaday dukaanka wanaagsan oo lagu beeray ciid wanaagsan oo bacrin ah? Soo iibsiga hore ee ubaxyada ama dib u dhiska taariikhaha beerto ayaa si xun u saameeya dhismaha xubnaha dhirta mustaqbalka.
Xilliga la beeray labadii sanno ee ugu horreeyay oo keliya ayaa koraan caleemo oo aanaan bararin. Isku dhejinta caleemaha iyo ubaxyada si dhakhso ah u engegay oo galaan mudada laba sano ah ee soo kabashada. Xoog-saarayaasha si guul leh ugu gudbay wareegga nolosha, si xoog leh u wiiqay waana inay helaan daryeel ku haboon ka dib ubax. Tani waxay quudin doontaa tamarta sanadka soo socda.
Ma taqaanaa? Maydka xayawaanka ee waqtiyadii hore ma aha oo kaliya qiimaha 15 jeer ka qaalisan baas madow, laakiin xitaa dahab. Wixii 450 g oo dhir udgoon ah waxaad iibsan kartaa faras carabi ah. Maanta, dhirtani sidoo kale ma aha mid raqiis ah.
Daabacaadda Crocus waxay ku lug leedahay laba siyaabood: abuur iyo gabadh corms. Tani ma aha geedi socod adag oo dhan.
Abuur shinni ah
Kordhinta miraha ka soo baxa miraha waxaa lagu dhaqmaa si ka yar inta badan ka timaadda corms. Farsamadani waa mid ka mid ah kuwa bannaanka u raba in ay dacaayado qaar ka mid ah noocyada dhirta qiimaha leh, sidaa daraadeed wax beerto ayaa lagu qaadaa tiro badan.
Inta badan qashinka botanikku wax dhibaato ah kuma lahan abuurka abuurka, laakiin kaliya xilliga dayrta wareegga miraha waa la lumayaa sababtoo ah bilawga ah ee dhaxanta hore. Waxyaabinta beerto ayaa si wanaagsan loo ilaaliyaa, laakiin kiisaska noocyada kala duwan ee dayrta xilliga dayrta, waxaa fiican in lagu beero miraha la uruuriyey oo kaliya in ka badan.
Maadaama maaddooyinka qallafsan ay koraan, si fiican oo caafimaad leh iyo xooggan oo xooggan ayaa laga kori karaa miraha kuwan. Mustaqbalka miisaanka oo la goostay abuurka wuxuu siinayaa caleemo aad u yar, iyo maaddaama cawsku aanu seexanin, waxaa fiican in lagu beero weelasha ama sanduuqyada bilowga. Ilaa uu caleemaha ugu horreeya soo muuqday, weelasha abuurku waa in lagu daboolaa filim nabar badbaado leh ama isbuunyo. Kiis labaad, waraabinta lagama qaadi karo. Geedo ayaa bilaabi doona in ay Bloom 3-4 sano.
Beerto waxay hoos u dhigtaa nalalka
Maqnaanshaha corms jiilaal kasta ma aha lagama maarmaan. Waa lagama maarmaan in la sameeyo tan seddexdii sano ee kasta ee xagaaga ee xilliga kuleylka intiisa kale, si loo kala saaro guluubka hooyada laga soo saaro digriiga sii kordhaya inta lagu jiro wakhtigan. Waxay noqon karaan ilaa toban gogo ', waxayna bilaabaan inay farageliyaan midba midka kale.
Natiijo ahaan, ubaxa xayawaanka ayaa si wayn hoos loogu dhuftay qiyaasta. Xaaladdan, kala soocida nalalka gabadha, ku-tallaalidooda iyo daryeel dheeraad ah oo loogu talagalay isku-dhafka ayaa loo sameeyaa sida soo socota. Si loo ururiyo walxaha beerto ee qaabka corms, dhirta hooyada waxaa lagu qodi karaa marar badan hal mar seddexdii sanaba. Waxay u fiicantahay in ay wax u geysato dayrta xilliga dayrta-ubaxa laga bilaabo Juun ilaa Agoosto, iyo guga-ubax laga bilaabo Julaay ilaa Sebtembar. Waxyaabinta Beerta waa in laga saaraa dhulka, qalajiyo, laga saaro jajabka dhicida iyo xididdada dhintay.
Waa inaad sidoo kale si taxadar leh u eegtaa nalalka cudurada. Ka tag kaliya alaab caafimaad leh. Dhaawaca farsamada waa in lagu bogsadaa ash ama dhuxul la jajabiyey. Ilaa laga beerto beertu waa in lagu kaydiyaa meel qalalan oo qabow.
Daryeelka ayaa hoos u dhigta berrinka bannaan
Sida loo kobciyo xoogga iyo caafimaad leh ka dib marka la beerto, waxaan sii sheegi doonnaa dheeraad ah. Laakiin ogow inaadan wakhti badan ku bixin doonin dadaal badan iyo waqti badan.
Si joogto ah u waraabinta sacfronka lagama maarmaan, marka laga reebo, waxay aad u xanuun badan tahay qoyaan joogta ah. Muuqaalo badan ayaa u baahan biyo biyo xilliyeed guga iyo xilliga dayrta. Laakiin dabeecadda ayaa sidoo kale naga caawisa sidoo kale: xaalad hal mar ah, barafku wuxuu dhaliyaa oo biyo siinayaa, tan kale - roobabka dayrta. Waraabin dheeraad ah ayaa la soo habeeyaa haddii jiilaalka uusan baraf lahayn, iyo dayrtu ma aha mid roob ku filan. Laakiin xitaa haddii qoyaan la'aanta ah, isku-dhajinta si guul leh u dhaafaan xilliga daaqsinka. Kaliya ee dhererkoodu yar yahay. Xilliga xagaaga, inta lagu jiro xilliyada xasilloonida, iskudhufka uma baahna biyo, waxay jecel yihiin inay ku nastaan ​​jawi qalalan.
Saldhigga oo dhan sii kordhaya dhirta beerta waa dharka ugu sareeya, sidaas darteed, ka fekeraya sida loo koro caafimaad iyo qurux badan oo ku yaal beertaada, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso kakooban Bacriminta macdanta. Dharka ugu sarreeya ee xakamaynta ayaa leh waxoogaa daboolan. Bacriminta cusub ee bacriminaha looma oggola. Waxay keenaan cuduro kala duwan. Dhoobo, digada si buuxda loo jajabiyey iyo Bacriminta kale ee macdanta ayaa la doorbidi doonaa.
Guga hore, inta lagu jiro muddada koritaanka firfircoon, bacriminta waa in la rusheeyaa baraf baraf ah. Iyadoo bilowga xilliga daaqsinka, waxaad u geli kartaa HOL. Later, dheeraad ah oo ka mid ah nitrogen wuxuu keeni doonaa koritaanka fiiqan ee caleemo, kaas oo keeni doona cudurada fangas aan loo baahnayn ee cimilada qoyan. Ka dib nus bil kadib, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo bacriminta hodanka ah ee fosfooraska iyo potassium ilaa goobta dhulka. Waxay ka qayb qaadan doonaan ubax wanaagsan iyo sameynta cormer xoog leh oo caafimaad leh.
Ka tegidda ubax ka dib
Sida ubaxyo badan, ubaxyadaasi waxay lumiyaan caleemahooda bartamihii xagaaga, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si gaar ah taxaddar u ahaato daryeellidda xagashada xagaaga xagaaga ka dib markaad ubaxdo. Haddii aadan haysanin qorshe ah inaad dhirta ku beddesho meel cusub, markaa waxaad heli kartaa adigoo ka saaraaya caleenta la yareeyey. Haddii la go'aamiyo in uu qodo miisaanka, markaa waqtiga ugu fiican waa Julaay.
Nidaamka waa sida soo socota:
Ka saar gabay-dhaliyeyaasha oo hoos u dhacay si aysan dhirtu u tagin dadaal dheeraad ah si ay isugu daydo inay abuurto abuurka.
Si tartiib ah u yaree xaddiga biyaha. Sidaa darteed soo bixitaanka dhammaan nafaqooyinka ayaa si tartiib tartiib ah u geli doona cormarka.
Marka caleemaha gebi ahaanba jaalaha ah, guluubka waa in la qodaa oo la qalajiyaa wax yar heerkulka qolka.
Marka xigta, ka saar miisaanka oo iska tuur digriiga jiran iyo kuwa waxyeelloobay.
Ku kaydi guluubka qolka si fiican u hawo leh heerkul ah 20 ° C.
Iyadoo ay sabab u tahay nuucyada naqaska ee nalalka gabadha oo ka soo jeeda, waxay u baahan yihiin in la fadhiisto. Haddii kale, buulka weyn ee geedi socodka ayaa la sameeyaa. Waxay noqdaan dad aad u badan, waxay noqdaan kuwo isbedelay, ubaxyadu way yar yahiin, dhirta ayaa lumisa rafcaanka riwaayadda.
Nalbooyinka waxay u baahan yihiin in ay qodaan kaddib marka caleemuhu si buuxda u engegaan bartamihii July - horraantii Agoosto. Ku kaydi ka hor transplanting meel diirran, oo hawo wanaagsan leh. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero sariiraha ubaxa bisha Agoosto ama Sebtember iyada oo masaafo u dhigma laba ama sedex tan oo dhexaad ah oo midba midka kale ah. Daloolka waa in lagu qodaa si qoto dheer u dhigma saddexda nalalka dhererka.
Kaydinta guluubka Crocus
Corms ka soo bixiyay waxay u baahan tahay in laga nadiifiyo dhulka, xididdada dhintay iyo miisaanka, ka dibna ku faafay hal lakab oo sanduuq ama sanduuq. Midka ugu yar yar waa la kariyaa, tusaale ahaan, sanduuqyada nacnaca. Ilaa Agoosto, alaabada beeritaanka waa in lagu hayaa heerkul ah +22 ° C oo aan ka yareyn, maxaa yeelay waxay ku jirtaa habkani in burooyinkeeda ubaxa la dhigo. Bishii Agoosto, heerkulka waa in la yareeyo +20 ° C Toddobaadkii - illaa +15 ° S. Laakiin xaaladaha noocaas ah way adagtahay in la abuuro guriga, waana ay fiicanyihiin, sababtoo ah waxay kaliya ku jiraan beeraha khaas ah oo aad ku hagaajin karto habka kuleylka. Xaaladaha caadiga ah ee nagu leh, nalalka qumbaha waa in la dhigaa meel qallalan oo qoyan leh iyadoo suurtogal ah in hawo wanaagsan iyo heerkulka qolka.
Ma taqaanaa? Si aad u soo saartid 1 kg oo ah lafaha cagaarka ah, waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso qiyaastii 600,000 oo ah dharka la yareeyay ubaxa cusub ee ubaxyada. Sidaa daraadeed falka "jidadka sida sacreebka." Bayaan cad ah.
Xoogaaga xilliga xaddidan
Ubaxyada guga, isku-dhufashada ayaa bilaabi kara inay labanlaabaan bartamihii bishii Maarso iyo bartamihii Abriil, iyada oo la bixinayo in aad iyaga kor u qaaddo oo tixgelinaysa dhammaan naqshadaha. Но сроки данного события могут значительно колебаться в зависимости от таяния снега и прогревания почвенного покрова. Были зарегистрированы случаи начала цветения весенних крокусов даже в конце февраля.
Осенние же виды более стабильны и постоянны в данном случае. Tayada xilliga daaqsigu waxay si toos ah ugu xiran tahay shuruudaha lagu soo celinayo burooyinkoodii la soo dhaafay - tani waxay quseysaa ubax guga ama xagaaga - xilliga guga ee ubaxa.
Sababta loo xoojiyay maaha ubax
Beeralayaal badan oo beerta iyo beeralayda ayaa la yaabay sababta ay ufududeyntu aysan u barbarin, marka wax walba u muuqdaan in la saxay, laakiin dhab ahaantii ma jiraan ubax, waxaana jira hal caleen kaliya. Aan isku dayno dhibaatadan isla markaana aan go'aan ka gaarno sababaha?
Marka hore, waxa si xun u saameyn kara ubax waa dhagid sii kordhaya ee geedka. Waxay noqotaa mid aad u qaali ah nalalka gabadha in hooyada hooyadu ay awood u leedahay in ay riixdo kaliya baal cusub oo caleemo cagaaran ah oo dhulka ka soo baxa. Nalalka ayaa faragalinaya midba midka kale, sidaas darteed ubaxu waa ka baxsan yahay su'aasha. Jidka ka baxsan halkan waa muuqaal - dhirta ayaa diirada saaraya oo waxay siiyaan meelo dheeraad ah digriiga cusub.
Sababta labaad waxaa laga yaabaa in lagu daboolo nalalka beerto aad u qoto dheer. Iyagu ma heystaan ​​tamar ku filan oo ubax ah. Dhammaan ciidammadoodii waxay ku qarash gareeyeen boodhadhka dhulka. Badanaa, dhirta qumbaha ee lagu beeray carrada boobka ah ayaa si aan kala go 'lahayn u dallacaya substrate dabacsan.
Waxaad xallin kartaa xaalada adoo caano ku dhajinaya qoto dheer oo ah 7 cm. Xannuunada dhoobada culus, basasha waxay u baahan yihiin in la xoojiyo wax ka badan 5 cm.
Sababta ugu dambeysa ee sababta loo xoqay ma aha ubax beertaada, waxaa jira la'aanta bacriminta asaasiga ah. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la sameeyo diyaarinta macdanta ku salaysan xilliga iyo tirooyinka loo baahan yahay. Marka hore, waxaa la sameeyaa inta lagu guda jiro beerashada: Bacriminta waxaa si toos ah loogu dabaqayaa godka. Saffron, kaas oo sii kordhaya hal meel sannado badan, wuxuu soo saaraa dhammaan nafaqooyinka ka soo baxa ciidda. Ubaxyada waa in la quudiyo guga, waraabiyo xal of Bacriminta macdanta. Bacriminta dabiiciga ah sidoo kale waa ku haboon yahay, sida ugu fiican ee compost soo bandhigay dalool beerto.
Ma taqaanaa? Been-abuurayaashu waxay helayaan lafa-beelka cufka. In Iran ee qarniyadii dhexe, gacmaha ayaa loo jaray tan. Jarmalka, nool lagu aasay ama lagu gubay saamiga. Faransiiska, wax waliba aad ayay u badanyihiin - kaliya ganaax 60 kg ah.
Cudurada Crocus iyo cayayaanka
Si kasta oo aad u adag tahay inaad isku daydo inaad daryeesho beertaada, koraan culeyska ama dalagyada kale ee bulbiyo, laakiin mararka qaarkood wax khalad ah ayaa dhacaya. Warshadu waxay joogsaneysaa marxaladda horumarinta, ama waxay lumisaa muuqaalkeeda sheekada, ama waxay dhimataa dhammaantood.
Sababaha tani waa cudurada iyo cayayaanka:
Viruses. Calaamadaha ugu horreeya ee muuqaalka muuqaalka ah ee saffron waa dhibicyo cad oo caleemaha u eg. Waxay u kala bixiyaan oo ku dhuftaan talooyinka. Waxay qaadaan caanaha nuugista, sida aphids, caarada ama thrips. Dhirta ay saameeyeen horayba waxay noqotey mid aan caadi ahayn oo ka mid ah hannaanka caabuqa, waana in isla markiiba la burburiyaa. Laakiin ha ka werwerin haddii cudurku uu ku dhajiyay nudaha yar ee goobtaada. Fayrasku ma gaari karo abuurka, iyo dhirta ayaa dib loo soo noolaan karaa iyadoo dib loo noolaynayo. Ha qaadan waqti, laakiin waxaad ku soo celin doontaa xayawaankaaga ubaxa.
Fungi. Wuxuu ku shaqeeyaa cimilada qoyan iyo qoyan. Sida caadiga ah, waxay saameeyeen qoriga dhirta. Waxay lumisaa cufnaanta, jeexjeexyada, iyo lebbiska qaababka midabka aan caadiga ahayn ee miisaanka. Guluub noocan oo kale ah waa in la baabi'iyaa, iyo caruurta kale si ay u qalalaan meel qabow. Ka hor inta aan la beeri, waa in lagu qooyay xal manganese daciif ah ama xal ah 0.2% "Fundazol".
Chlorosis Cudurkan, caleemaha waxay bilaabaan inay huruud noqdaan, taas oo aysan keenin la'aanta wax nafaqo ah ee ciidda, laakiin ayadoo ay waxyeello farsamo ah u keenayso tuubada, dheecaanka liita ama xaaladaha koritaan la'aanta.
Mice iyo burooyin. Waxay waxyeellada corms, jebiyaan marinnadoodii iyo xitaa iyaga oo gebi ahaanba u qaata guryahooda ama nibbling on xididada. Haddii dhirta uu si liidata u koraan, xaglaha daciifka ah, ka dibna waxaa suurtogal ah in la xukumo in basasha ay u bislaadaan. Xaaladdan, waxay u baahan yihiin inay qodaan oo ka saaraan qaybta cayayaanka. Ka ilaali meelaha meelaha la gooyey ee dambaska oo ka tag hawo furan dhowr saacadood si aad u qalalaan. Si aan loo jiidin jiirarka, waxaad u baahan tahay in aad ka saarto qoryaha iyo cawska oo dhan oo ku dhex jira illaa saddex mitir oo ka soo wareega dhulka, sababtoo ah jadeecada halkaa ku taal. In ka badan seddex mitir oo bukaan ah, kama carari doonaan.
Diirarka dhuxul-dhogorta. Gnaw xididada ka samee godadka nalalka. Waxaa loo aqoonsan karaa xilliga dayrta marka la jarayo. Marka cayayaanka waaweyn ee cayayaanka ah ay isku diyaarinayaan arday, waxay si sahlan loo qodi karaa, loo ururin karaa loona burburin karaa.
Slugs On carrada dhoobada ama culus carrada hoose hoose ee deggaan. Waxaad ka takhalusi kartaa iyaga oo gacan ka helaya xal gaar ah ee slugs ama, marka ay soo degaan hareeraha, samee sanduuq caqli ah oo la macno ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Crocus 2020